Ihowuliseyili HCV Rapid Test Cassette / Strip / kit (WB / S / P) abavelisi kunye nabathengisi | HEO
UVAVANYO OLUNYE LWEHCV (Blonke ...
Ikhasethi yovavanyo ekhawulezileyo yeHCV / iStr ...
Uvavanyo lwe-COVID-19 IgG / IgM olukhawulezayo ...
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid ...
OEM / ODM yoMvelisi Corona ...
Ikhasethi yovavanyo ekhawulezileyo yeHCV / iStrip / ikhithi (WB / S / P)
I-Cassette / Strip yovavanyo olukhawulezileyo lwe-HCV kukuhamba kwe-chromatographic immunoassay esecaleni ekufumaneni umgangatho wee-antibodies kwiHepatitis C Virus kwiGazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma. Inika uncedo ekuchongeni usulelo lweHepatitis C Virus.
I-Hepatitis C virus (HCV) yintsholongwane enye ye-RNA yosapho lwe-Flaviviridae kwaye iyinto ebangela isifo se-Hepatitis C. I-Hepatitis C sisifo esinganyangekiyo esichaphazela malunga ne-130-170 yezigidi zabantu kwihlabathi liphela. Ngokwe-WHO, ngonyaka, abantu abangaphezu kwama-350,000 babulawa zizifo zesibindi ezinxulumene ne-hepatitis C kunye ne-3-4 yezigidi zabantu abosulelwe yi-HCV. Phantse i-3% yabemi behlabathi baqikelelwa ukuba bosulelwe yi-HCV. Ngaphezulu kwe-80% yabantu abosuleleke yi-HCV bakhula izifo ezinganyangekiyo zesibindi, i-20-30% ikhula isifo se-cirrhosis emva kwe-20-30 yr, kwaye i-1-4% isweleke kwi-cirrhosis okanye kumhlaza wesibindi. Abantu abasulelwe yi-HCV bavelisa ii-antibodies kwintsholongwane kwaye ubukho bezi ntsholongwane egazini kubonisa usulelo lwangoku okanye oludlulileyo kwi-HCV.
[ULWAKHIWO] (25sets / 40sets / 50sets / imigaqo elungiselelwe wena konke ukuvunywa)
Ikhasethi yovavanyo / umcu uqulethe umlenze osambathiswe ngokudibanisa i-antigen ye-HCV kulayini wovavanyo, i-antibody yomvundla kulayini wokulawula, kunye nephedi yedayi equlathe igolide ye-colloidal edityaniswe ne-antigen ye-HCV. Ubungakanani beemvavanyo zashicilelwa kwileyibhile.
Ikhasethi yovavanyo / umcu
Izinto ezifunekayo kodwa azibonelelwanga
Isikhongozelo sokuqokelelwa kwesampula
Iindlela eziqhelekileyo ziyahluleka ukwahlula intsholongwane kwinkcubeko yeseli okanye ukuyibona nge-microscope ye-electron. Ukwenza i-genome yentsholongwane kwenze ukuba kube nokwenzeka ukuba kuphuhliswe uvavanyo lwe-serologic olusebenzisa iantianti eziphindaphindayo. Xa kuthelekiswa nesizukulwana sokuqala se-HCV EIA zisebenzisa i-antigen enye ye-antigen, ii-antigen ezininzi zisebenzisa iprotein ephindaphindayo kunye / okanye ii-peptides zokwenziwa ziye zongezwa kwiimvavanyo ezintsha ze-serologic ukunqanda ukuphinda-phinde ukusebenza kwakhona nokunyusa ubuntununtunu bovavanyo lwe-HCV antibody. I-HCV Rapid Test Cassette / Strip ifumanisa ii-antibodies kusulelo lwe-HCV kwiGazi liphela / iSerum / iPlasma. Uvavanyo lusebenzisa indibaniselwano yeeprotein eziboshwe ngamasuntswana kunye neeproteni zeHCV eziphindaphindayo ukukhetha ngokukhethekileyo ii-antibodies kwi-HCV. Iiproteni ze-HCV eziphindaphindayo ezisetyenziswa kuvavanyo zifakwe kwiijeni zazo zombini izakhiwo (i-nucleocapsid) kunye neeproteni ezingezizo ezokwakha.
I-HCV Rapid Test Cassette / Strip yi-immunoassay esekwe kumgaqo wobuchule be-antigen-isandwich. Ngexesha lokuvavanywa, isampulu yeGazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma ifudukela phezulu ngesenzo se-capillary. Amachiza omzimba kwi-HCV ukuba abekhona kwi-specimen aya kubophelela kwii-HCV conjugates. Ubunzima be-immune emva koko bufakwe kwi-membrane yi-antigen ye-HCV esele yenziwe ngaphambili, kwaye umgca obonakalayo obonakalayo uya kubonakala kwindawo yovavanyo ebonisa isiphumo esihle. Ukuba ngaba ii-antibodies ze-HCV azikho okanye azikho ngaphantsi kwenqanaba elibonakalayo, umgca wemibala awuyi kubakho kumda womgca wovavanyo obonisa iziphumo ezibi.
Ukusebenza njengolawulo lwenkqubo, umgca onombala uya kuhlala uvela kummandla wolawulo, obonisa ukuba ivolumu efanelekileyo yesampulu yongezwa kwaye ukubethelwa kwembumbulu kwenzeke.
(Lo mfanekiso ngowereferensi kuphela, nceda ujonge kwinto leyo.) [Ngekhasethi]
Susa ikhasethi yovavanyo kwisingxobo esitywiniweyo.
Kwi-serum okanye kwi-specimen ye-plasma: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo kwaye ugqithisele amathontsi ama-3 e-serum okanye iplasma (malunga ne-100μl) kwi-specimen well (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
Ukufumana iisampulu zegazi elipheleleyo: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo kwaye udlulisele i-1 yegazi elipheleleyo (malunga ne-35μl) kwi-specimen kakuhle (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko dibanisa i-2 yehla yesikhuseli (malunga ne-70μl) kwaye uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
Lindela imigca enemibala ukuba ivele. Tolika iziphumo zovavanyo kwimizuzu eli-15. Musa ukufunda iziphumo emva kwemizuzu engama-20.
Ukusetyenziswa kwe-vitro diagnostic kuphela.
Abaqeqeshi bezempilo kunye nabaqeqeshi kwiindawo zokunakekelwa.
Nceda ufunde lonke ulwazi olukule ncwadana ngaphambi kokuba wenze uvavanyo.
Ikhasethi yovavanyo / isiqwenga kufuneka sihlale kwisingxobo esitywiniweyo kude kusetyenziswe.
Zonke iisampulu kufuneka zithathelwe ingqalelo njengezinobungozi kwaye ziphathwe ngendlela efanayo ne-arhente eyosulelayo.
Ikhasethi yovavanyo esetyenzisiweyo / umcu kufuneka ulahlwe ngokwemigaqo yomanyano, yelizwe kunye neyasekhaya.
Ulawulo lwenkqubo lubandakanyiwe kuvavanyo. Umgca wombala ovela kummandla wolawulo (C) uthathwa njengolawulo lwenkqubo yangaphakathi. Iqinisekisa ivolumu yesampulu eyaneleyo, ukubhobhoza inwebu eyaneleyo kunye nenkqubo efanelekileyo yenkqubo.
Imigangatho yolawulo ayibonelelwa ngale khithi. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba kuvavanywe ulawulo oluqinisekileyo nolungalunganga njengeendlela ezifanelekileyo zelebhu ukuqinisekisa inkqubo yovavanyo kunye nokuqinisekisa ukusebenza kovavanyo olufanelekileyo.
I-HCV Rapid Test Cassette / Strip ilinganiselwe ukubonelela ngobungakanani bemeko. Ukuqina komgca wovavanyo akuthethi kuthi kuyahambelana nokuxinana kwamachiza omzimba egazini.
Iziphumo ezifunyenwe kolu vavanyo zenzelwe ukuba zibe luncedo ekufumaneni isifo kuphela. Ugqirha ngamnye kufuneka atolike iziphumo ngokudibeneyo nembali yesigulana, ukufunyanwa komzimba, kunye nezinye iinkqubo zokuqonda isifo.
Iziphumo zovavanyo ezingalunganga zibonisa ukuba ii-antibodies kwi-HCV azikho okanye kumanqanaba angafumaneki kuvavanyo.
Isivumelwano noVavanyo oluKhawulezayo lwezoRhwebo lweHCV
Ukuthelekiswa kwecala ngecala kwenziwa ngokusetyenziswa kovavanyo olukhawulezayo lwe-HCV kunye novavanyo lwe-HCV olukhawulezileyo kwezorhwebo. Iimpawu zeklinikhi ezili-1035 ezivela kwizibhedlele ezintathu zavavanywa kuvavanyo olukhawulezayo lwe-HCV kunye nekhithi yokuthengisa. Amasampuli \_ ahlolwe nge-RIBA ukuqinisekisa ubukho be-HCV antibody kwiisampulu. Ezi ziphumo zilandelayo zibekiwe kwezi zifundo zonyango:
Uvavanyo olukhawulezileyo lweHCV Itotali
HEO TECH® Ezintle 314 0 314
Ukungalunganga 0 721 721
Itotali 314 721 1035
Isivumelwano phakathi kwezi zixhobo zimbini yi-100% yemizekelo elungileyo, kunye ne-100% yeesampulu ezimbi. Olu phononongo lubonise ukuba uvavanyo lweHCV olukhawulezileyo lilingana kakhulu nesixhobo sentengiso.
Iimpawu zeklinikhi ezingama-300 zavavanywa kunye novavanyo olukhawulezayo lwe-HCV kunye nekhithi ye-HCV RIBA. Ezi ziphumo zilandelayo zibekiwe kwezi zifundo zonyango:
Itotali 100 200 300
Egqithileyo I-COVID-19 IgG / IgM yeKhasethi eKhawulezayo yoVavanyo (igolide yeColloidal)
Okulandelayo: UVAVANYO OLUNYE LWEHCV (Igazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma)
Uvavanyo lwe-anti hcv antibody
uvavanyo lwegazi lwe-hcv
hbsag ngokuchasene hcv
Uvavanyo lwe-hcv genotype
Isixhobo sovavanyo esikhawulezayo seHCV
Uvavanyo lwe-hcv rna
Iziphumo zovavanyo zehcv
I-Influenza A + B Ikhasethi yokuvavanya ngokukhawuleza
UVAVANYO OLUNYE LWEHCV (Igazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma)
Idengue IgGIgM + Ns1 Combo Icebo lovavanyo (iBlook yonke ...
Idengue IgGIgM yoVavanyo lwesiXhobo (iGazi elipheleleyo leSerumPlasma)
Idengue Ns1 Uvavanyo lweDivayisi (Igazi elipheleleyo leSerumPlasma)